Vory Lanona Mamonjy ‘Fitroaran'ny Olom-pirenena’ Ireo Maleziana	Voadika ny 15 Janoary 2013 14:15 GMT
Zarao: Folo an'arivony ireo tonga namonjy ny ‘Himpunan Kebangkitan Rakyat’ (adika ara-bakiteny hoe Fitroaran'ny Fivoria'ny Olom-pirenena) ao Kuala Lumpur, Malezia ny andron'ny 12 Janoary 2013, izay nokarakarain'ny Firaisamben'ny Mpanohitra Pakatan Rakyat ka nampitombo ny heriny izy ireo amin'izao fotoana mialoha ilay fifidianana faobe nambara fa hotanterahina amin'ity taona ity.
Nanome famintinana ny hetsika tamin'ny fomba fijeriny i Ipohgal : Maro ireo mpanao fihetsiketsehana no nitondra sira, rano mineraly ary servieta, vonona hiatrika izay andianà baomba mandatsa-dranomaso sy tafondron-drano hafa indray. Mahagaga, vitsy dia vitsy ny polisy tonga tao hany ka nanjaka ny karnavaly. Nandeha be ny tsenan'ireo mpivarotra T-shirt, fahatsiarovana, sakafo sy zava-pisotro manodidina ny kianjan'i Merdeka.
Mahavelombolo ny fahitana ireo olona tsy mifankahalala miara-mitsangana na mipetraka ao anatin'ny firaisankina. Vahoaka iray, saina iray izahay. Tena Anak-anak Bangsa Malezia (Zanaky Malezia) marina sy am-pireharehana isika. Nitehaka, nihira ary nifankahery tamin'ny feo iray isika. Nifanampy tamin'ny fifanomezana rano mineraly ny tsirairay ary nanome vola ihany koa isika mba handoavana ny hofan'ny kianja. Eny, nandoa vola ho an'ny mpikarakara izahay mba hanatrika ny fihetsiketsehana, fa tsy nokaramain'izy ireo mba hanatrika izany. Ao anatin'ny kianjan'i Merdeka. Sary: @Fred9Fareed
Tsara ho an'ny firenena ny fisiana fihetsiketsehana tahaka ny androany. Marobe amin'ireo vahoakantsika no leo sy kamo izay tsy manan-katao rehefa faran'ny herinandro ka mitady antony hialàna ao afovoan-tanàna. Mpanao fihetsiketsehana teny ivelan'ny kianja. Sary avy amin'i @imokman
@NatAsasi: tonga izahay, nanao fihetsiketsehana izahay, nody izahay arahabaina ny rehetra! incl @PDRMsia @najibrazak. jereo ny fahanginana & filaminan-javatra? #KL112
Vao haingana, nampiseho ‘sombim-pahampafantarana” horonantsary mampivarahontsana tamin'ny famoriam-bahoaka efa lasa ao amin'ny Youtube ny Al Jazeera: Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraJerrenn Lam
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 17 ora izayMaleziaAny Malezia, Mandeha An-Tsekoly Ao Anatin'ny Tahotra Ireo Ankizy Mpitsoa-ponenana Myanmar
17 ora izayHong Kong (Shina)Sary Mampiseho Ny Fahasamihafana Ara-kolontsaina Eo Amin'i Hong Kong sy Shina